Iyo inoshanda musimboti ye cylindrical blower
Iyo inoshanda musimboti we cylindrical blower
Iyo inoshanda musimboti we centrifugal blower yakafanana neiyo yecentrifugal ventilator, asi kumanikidza kwemhepo kunowanzoitwa kuburikidza neanoverengeka anoshanda mafekitera (kana akati wandei mazinga e - pasi pekuita kwesimba re centrifugal. Anofuridza ane rotor inotenderera nekumhanya kwazvo. Rotor inofambisa mhepo kuti iende nepamhanho huru. Simba re centrifugal rinoita kuti mweya uyerere uchienda kune chokubudisira feni ichitevedza mutsetse usingabatanidzi uri mukakasi nechitarisiko cheicho chisina kufanira.Mweya mutsva unozadzikiswa nekupinda pakati peimba .
Kushanda musimboti weimwe nhanho kumhanya kumhanya centrifugal feni ndeiyi: injini nekumhanyisa kumhanya kutenderera mugodhi kutyaira impeller, axial mweya wekufambisa nekutengeswa kunze kwenyika mushure mekupinda-kumhanya-kumhanya kutenderera impeller muye radial kuyerera kwakasimudzwa, uyezve ndokupinda mudumbu kuwedzera kudzvinyirira, shandura kuyerera mafambiro uye kudzikisira, iyo yekudzora mhedzisiro ichave iri yekumhanya kumhanya kutenderera mweya pamwe neinetic simba mune yekumanikidza simba (ingangoita simba), ita kuti fan ishambire yakadzikama kumanikidza.
Terevhizheni kutaura, kumanikidza-kuyerera hunhu munyonga we centrifugal blower tambo yakatwasuka, asi nekuda kwekukwesana kusagadzikana uye kumwe kurasikirwa mukati me fan, iyo chaiyo kumanikidza uye kuyerera hunhu curve zvinyoronyoro inoderera pamwe nekuwedzera kwekuyerera, uye inoenderana simba-kuyerera curve ye centrifugal faninomuka pamwe nekuwedzera kwekuyerera. Kana fan iri ichimhanya neyakajairika kumhanya, iyo yekushanda poindi yeiyo fan inofamba pamwe neyekumanikidza-kuyerera hunhu curve. Iyo yekushandisa poindi ye fan inoenderana kwete kwete chete pane kwayo kuita, asiwo nehunhu hwesisitimu. Kana kushomeka kwepombi network kukwira, iyo pombi yekuita munyonga inozove yakanyorovera.
Iwo musimboti we fan mutemo ndewekuwana iwo anodikanwa mamiriro ekushanda nekushandura iko kuita curve yeiyo fan pachayo kana hunhu curve yekunze pombi network.Nekuenderera mberi kwekuvandudza kwesainzi uye tekinoroji, AC mota yekumhanyisa mutemo tekinoroji inoshandiswa zvakanyanya. Kubudikidza nechizvarwa chitsva chemagetsi zvinodzorwa zvizere, kuyerera kweiyo fan kunogona kudzorwa nekushandura kumhanya kwe AC mota ine frequency converter, iyo inogona kudzora zvakanyanya kurasikirwa kwesimba kunokonzerwa neiyo yapfuura mechina maitiro ekuyerera kwekudzora.
Simba rekuchengetedza mutemo wekuwandisa shanduko mutemo:
Kana mweya vhoriyamu ichida kudzikiswa kubva paQ1 kusvika paQ2, kana nzira yekudzora ikabvumidzwa, poindi yekushanduka inochinja kubva paA kuenda kuB, mhepo inowedzera inosvika kuH2, uye shaft simba P2 inoderera, asi kwete yakawandisa. Kana iyo frequency kutendeuka mutemo ikatambirwa, nzvimbo yekushandira ye fan iri kubva A kusvika C. Zvinogona kuonwa kuti pasi pemamiriro ekuti iwo iwo iwo mweya vhoriyamu Q2 inogutsikana, kumanikidzwa kwemhepo H3 kuchadzikira zvakanyanya uye simba richadzikiswa
P3 yakaderedzwa zvakanyanya. Kurasikirwa kwesimba kwakachengetedzwa △ P = △ Hq2 yakaenzana nenzvimbo BH2H3c. Kubva pane ongororo iri pamusoro, isu tinogona kuziva kuti frequency kutendeuka mirau inzira inoshanda yekugadzirisa. Iyo blower inotora frequency kutendeuka mutemo, haizoburitse yakawedzera kumanikidza kurasikirwa, simba rekuchengetedza mhedzisiro inoshamisa, gadzirisa mweya vhoriyamu renji ye0% ~ ~ ~ 100%, inokodzera hwakawanda hwakawanda mirau, uye kazhinji pasi peakaderera mutoro mashandiro zviitiko. Nekudaro, kana kumhanya kwe fan kuchiderera uye nemhepo vhoriyamu ikadzikira, kumanikidzwa kwemhepo kuchachinja zvakanyanya. Mutemo wakaenzana we fan unotevera: Q1 / Q2 = (N1 / N2), H1 / H2 = (N1 / N2) 2, P1 / P2 = (N1 / N2) 3
Zvinogona kuoneka kuti kana iyo spidhi yakaderedzwa kusvika hafu yepakutanga yakarongedzwa kumhanya, kuyerera chiyero, kumanikidza uye shaft simba rinoenderana nekushanda mamiriro poindi inodonha kusvika pa1 / 2, 1/4 ne1 / 8 yepakutanga, iyo ndicho chikonzero nei kuwanda kwekushandura mutemo kunogona kuchengetedza magetsi zvakanyanya. Zvinoenderana nehunhu hwehuwandu hwekushandurwa kwemutemo, mune yekuchenesa tsvina, iyo aeration tangi inogara ichichengetedza yakajairwa mwero mwero we5m, uye uyo anovhuvhuta anodikanwa kuti aite akasiyana siyana kuyerera mutemo pasi pemamiriro eanogara achibuda kumanikidza. Kana iko kudzikadzika kudzika kwakakura, mhepo kumanikidza inodonha yakawandisa, isingakwanise kusangana nezvinodiwa muitiro. Kana iko kudzikadzika kudzika kuri kudiki, hakugone kuratidza zvakanakira simba rekuchengetedza, asi ita kuti chishandiso chiome, imwe-nguva yekudyara yakawedzera. Naizvozvo, pasi pemamiriro ezvinhu kuti aeration tangi yeiyi purojekiti inoda kuchengetedza huwandu hwemvura ye5m, zviri pachena kuti haina kukodzera kutora frequency kutendeuka maitiro maitiro.
Iyo yekupinda gwara vane inodzora chishandiso yakashongedzerwa ne seti yeinogadzirika Angle gwara vane uye inlet gwara vane ine padyo nekuyamwa inlet yeanofuridza. Basa rayo nderekuti kuyerera kwemhepo kutenderera usati wapinda mumhepo, zvichikonzera kumhanyisa kumhanya. Nhungamiro blade inogona kutenderedzwa yakatenderedza yayo yega axis. Kutenderera kwega kwega Angle yejasi kunoreva kushandurwa kweye giredhi blade kumisikidza Angle, kuitira kuti mafambiro emhepo ayerere achienda kune fan fan impeller inoshanduka zvinoenderana.
Kana giraidhi yekumisikidza kumisikidza Angle 0 = 0 °, giraidhi rinotungamira harina zvazvinoita pamhepo yekupinda, uye mweya unoyerera uchipinda mukati mechinoshambadza nenzira yeradio. Kana 0 BBB 0 °, iyo yekupinda gwara vane ichaita mhedzisiro velocity yemhepo yekupinda inlet kutsauka О Angle padivi pekutenderera kwetenderedzwa velocity, uye panguva imwechete, ine kumwe kumonyoroka mhedzisiro pane iyo velocity yemhepo yekuyerera inlet. Iyi pre-kutenderera uye yekukanganisa mhedzisiro inotungamira mukudzikira kweiyo fan performance curve, kuitira kuti uchinje mashandiro ezvinhu, uye uone iyo fan kuyerera mutemo. Simba rekuchengetedza musimboti weinlet gwara vane mutemo.
Kufananidza kwenzira dzakasiyana dzemutemo
Kunyangwe iyo frequency kutendeuka kugadziridzwa kwe centrifugal blower kugadzirisa renji iri yakafara kwazvo, ine simba rakakosha pakuponesa magetsi, asi nehurongwa hwehurongwa huganhurirwa nemamiriro ezvinhu, iyo renji yekugadzirisa ingori 80% ~ 100%, iyo hama kuyerera mwero yakachinja zvishoma, frequency shanduko yekugadzirisa nzira uye gwara vane maviri akadyiwa simba musiyano hausi mukuru, saka inverter kudzora modhi, iyo yekuchengetedza simba yakakosha show kuti isazobuda, inorasikirwa nesarudzo zvarinoreva. Anofuridza nemutungamiriri ane gadziriro modhi modha anogona kugadzirisa vhoriyamu yemhepo (50% ~ 100%) mune yakakura renji pasi pemamiriro ekuchengetedza kuburitswa kwekubuda nguva dzose, kuitira kuti uve nechokwadi chemukati wakagadzikana weakisi yakanyungudutswa iri musweji uye chengetedza simba zvishoma. Naizvozvo, iyo yekumhanyisa-inomhanya centrifugal fan ine gwara vane vane mutemo modhi inofanirwa kusarudzwa sekusarudzwa kwemidziyo muchirongwa ichi. Panguva imwecheteyo, kuti zviratidze zvirinani simba rekuchengetedza, kune yakakura-simba centrifugal fan, kutarisisa kunofanirawo kubhadharwa kusarudzo yekutsigira mota, sekushandisa kwe10kV yakakwira voltage mota, zvakare kubatsira kudzikisa kushandiswa kwesimba .